Umshini weRealme TechLife Robot, ukuhlaziywa okujulile | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 30/06/2021 14:00 | Gadgets, General, Izibuyekezo
I-Realme muva nje inohlelo lokukhishwa okumangazayo, muva nje sikukhombise idivayisi yalo yakamuva ephezulu maphakathi nebanga, iReal GT, okube yinjabulo yabasebenzisi abaningi. Ngasikhathi sinye sikwazi ukubona ngisho namawashi ahlakaniphile. Kodwa-ke, umkhiqizo esikulethela wona namuhla mhlawumbe yinto obungayilindelanga, i-vacuum vacuum.
I-Realme TechLife Robot Vacuum ukwethulwa kwamuva kohlobo, irobhothi yokuhlanza irobhothi emangaza ngokusebenza kwayo / inani lentengoIngabe kusinikeza izici ezinhle kangaka? Sihlaziya ngokujule lokhu kuhlanza irobhothi iRealme nazo zonke izici zayo ngokuningiliziwe, thola nathi.
Cishe cishe njalo, sifake ividiyo phezulu emayelana nesiteshi sethu se YouTube lapho uzokwazi khona ukubona ukungabikho okugcwele ebhokisini kwalesi sici sokuhlanza irobhothi kanye nokuhlolwa kwaso nokuhlolwa kwemisindo. Thatha ithuba ubhalisele isiteshi sethu YouTube bese usishiyela noma imiphi imibuzo.
1 Izinto zokwakha nokuklama, okwakudala akukaze kwehluleke
2 Amathangi nezinhlelo zokuhlanza
3 Isisekelo sokushaja, ukuzimela nokusetshenziswa
4 Amandla okuncela kanye nesipiliyoni sokuhlanza
Izinto zokwakha nokuklama, okwakudala akukaze kwehluleke
Igama elisemthethweni ngu Umshini weRealme TechLife Robot, kodwa ngokuthembeka, kukho konke okunye ukubuyekezwa esizokubiza ngokuthi i-Realme robot vacuum cleaner yezomnotho ekufundeni. Le divayisi yenziwa ngezinto zepulasitiki ezahlukahlukene, njengoba ungalindela. Sikhuluma ngomkhiqizo omkhulu impela, Ingamasentimitha angama-35 ububanzi nangu-10 cm ukuphakama, Akuyona into ehlangana kakhulu emakethe kepha ngokwethembeka, ubukhulu banele.
Ingxenye engenhla ithweswe umqhele ngohlelo lwesiphepho, ibhanoyi elimnyama qKuzoba uzibuthe othulini (umdlalo wokuzilibazisa wezinkampani eziningi zokuhlanza amarobhothi engingawaqondi kahle) nezinkinobho ezimbili, eyodwa yesisekelo sokushaja nenkinobho ye-ON / OFF. Sober but pretty, ake sibhekane nakho, kubukeka kukuhle cishe noma yikuphi. Yenziwe ngepulasitiki futhi isisindo esiphelele siseduze Ama-3,3 kilogram esewonke.
Ngezansi siyathola izingalo ezimbili ezinamabhulashi okuhlanza azoqondisa ukungcola endaweni yokumunca, isondo le- «idler» eliphethe ukugcina ucingo luphambili, amasondo amabili ahlanganisiwe ukunqoba izithiyo ezingaba amasentimitha amabili, indawo yokudonsa nebhulashi elihlanganisiwe nokubona kancane ithangi.
Amathangi nezinhlelo zokuhlanza
Sithole idiphozi yama-600 ml solid Ngohlobo olubandakanya ukufisa kuphela, uma sithenga (ngokwehlukana) iphakethe lokukhuhla le diphozi lizokwehliselwa ku-350ml. FUTHIIbhulashi eliphethe ukumuncwa lihlanganisiwe, sinamabhande enjoloba engicabanga ukuthi inguqulo esebenza kahle kakhulu, namabhulashi enayiloni azosisiza ukuthi sithole umphumela ofanayo. Ukulondolozwa kwaleli bhulashi nezinye izesekeli ngokujwayelekile, ithuluzi le-universal lifakiwe kuphakheji.
Amabhulashi ohlangothini amabili asiza ukuqondisa i- ukungcola, ngakho-ke umphumela wokuhlanza uphakeme kancane kunalawo amarobhothi anayo eyodwa kuphela. Inesihlungi se-HEPA esilula sokufaka esikhundleni sephakeji, noma kunjalo, asifaki uhlangothi oluseceleni noma amabhulashi aphakathi, Kuzofanele sibathole ezindaweni ezijwayelekile zokuthengisa (asazi intengo yezingxenye zokungcebeleka ngesikhathi sokuhlaziywa).
Ukukhipha idiphozi kulula, ingxenye engemuva "inenkinobho" encane okuthi uma icindezelwe izosivumela ukuthi sikhiphe ithangi eliqinile. Kwenzeka okufanayo ngokukhipha noma ukuguqula isihlungi se-HEPA, ngasendleleni, esinesihlungi sangaphambi kokusebenza kahle kwemesh.
Isisekelo sokushaja, ukuzimela nokusetshenziswa
Ngokuqondene nesisekelo sokushaja, kufanele ngithi ngithole imininingwane yokuqala enhle. Lesi sisekelo sinosayizi ojwayelekile nokuklanywa, kepha kunenzuzo eminye imikhiqizo ebonakala ngathi iyakhohlwa. Inesistimu yokuqoqa ikhebula ezansi ezosivumela ukuthi sihlanganise isixhumi samandla ngaphandle kokuphuma, ngezindawo ezimbili eziseceleni ukuze singabi nezinkinga ekukhetheni indawo yesisekelo sokushaja, lokhu ngokungangabazeki kwiseva evivinya lokhu okumbalwa ngenyanga, kuyinto enhle kakhulu.
Kokunye, irobhothi lakwaRealme lisithola kalula isiteshi sokushaja, lingaba nenkinga ehamba kancane okokuqala, kepha uma selitholakala ebalazweni kuzoba ucezu lwekhekhe. Isikhathi esiphelele sokushaja sizoba cishe ngamahora amabili nge-5.200 mAh yaso esihlinzeka ngokuhlanzwa ngaphezulu kwemizuzu engu-80 ngokwesilinganiso.
Uhlelo lokusebenza lweRealme Link (Android / iOS) kusikhumbuza uRoborock, ngakolunye uhlangothi, okungenye yezinto ezihamba phambili emakethe, ngakho-ke isipiliyoni sihle kakhulu, sincoma ukuthi ubuke ividiyo lapho sikukhombisa khona sonke isinyathelo sokumisa ngesinyathelo futhi ikakhulukazi uzokwazi ukubona izivivinyo zezivivinyo ezihlukile.
Amandla okuncela kanye nesipiliyoni sokuhlanza
Sinamandla amakhulu wokudonsa ka-3.000 Pa, Kodwa-ke, sizohlukanisa phakathi kwezinhlobo ezine zokuhlanza ezitholakala kuhlelo lokusebenza:
Ukuthula: 500 Pa
Okuvamile: I-1.200 Pa
Turbo: I-2.500 Pa
Ubukhulu: 3.000 Pa
Ukuhlanzwa nsuku zonke kuzoba ngaphezu kokwanele ngemodi evamile, Kodwa-ke, uma sifuna umphumela oheha ukunakwa kwethu, sizokhetha imodi Turbo. Imodi ephezulu isadlulwa ngokomsindo, lapho ubuncane bayoba ngama-55 dB.
Okuhlangenwe nakho kube kuhle kakhulu ngokwenziwa kwemephu, esheshayo futhi ethatha cishe imizuzu engama-40 phansi ngamamitha ayisikwele angama-72. Kuyadingeka futhi kunikeza imiphumela yokuhlanza ehambelana kalula namadivayisi abiza amakhulu ambalwa wamadola ngaphezulu.
Ukusebenzisana ne-Alexa ne-Google Assistant
Uhlelo lokuzula lwe-LiDAR
Ngigqamisa ukusebenza okulandelayo kohlelo lokusebenza:
Ithuba lokukhawulela izindawo zemephu namagumbi athile
Lungisa ngokuzenzakalela ukuncela ngokuya ngohlobo lomhlabathi otholiwe
Ngokwami, angikwazanga ukuvumelanisa lolu limi lube yiSpanishi, ngakho-ke kuye kwadingeka ngenze ukuthi i-vacuum cleaner ikhuluma isiNgisi ngendlela ehlukile yase-Asia. Kungimangazile ukuthi incane "intekenteke" ngezingqinamba kunalena ebiza kakhulu, Kuvame ukulingana phakathi kwemilenze yezihlalo ngisho nangaphansi kosofa abaphezulu, into engimangaze kamnandi.
I-Realme TechLife Robot Vacuum ibiza ama-euro angama-379 kuphela, yize okwamanje singayithenga ku-AliExpress ngezipesheli ezithile (qaphela amasiko) noma iwebhusayithi yeRealme. Intengo evelele yokuba phakathi kwama-50/100 euros aphansi kunezinye izindlela ezinikeza imiphumela efanayo.
Umshini We-TechLife Robot
Kuthunyelwe ku: 30 Juni ka-2021
Ukuhlanganiswa okuhle neRealme Link nemisebenzi
High ukuncela umthamo
Ukuzimela okuhle nokuhlanza okulula
Kufaka izingxenye ezimbalwa zokugcina
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » I-Realme TechLife Robot Vacuum, i-vacuum vacuum enekhwalithi / intengo enhle kakhulu